Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Sri Lanka » Njem nlegharị anya anụ ọhịa: Mkpa maka akụkọ ndị mara mma
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ Sri Lanka • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Njem nlegharị anya anụ ọhịa
dere Srilal Miththapala - eTN Sri Lanka
Ndị na-etinye aka na ịzụ ahịa njem nlegharị anya Sri Lanka kwesịrị ịdị na-emepụta akụkọ mara mma nke ahụmahụ anụ ọhịa na Sri Lanka, kama igosi eziokwu na ọnụ ọgụgụ ndị bụ isi. Ihe dị mkpa bụ imepụta na ịkọ akụkọ anụ ọhịa site na mmetụ mmadụ.
Mgbe onye njem nwere ike na-akpọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ njem ka ọ jụọ ajụjụ banyere ihe nkiri anụ ọhịa na Sri Lanka, ọtụtụ mgbe ndị na-ere ahịa na-enye njem njem ma kwuo banyere anụmanụ ndị a pụrụ ịhụ, kama igosi anụ ọhịa n'ụzọ mara mma.
Nke a ga-achọ ndị ọkachamara njem nlegharị anya nkeonwe ka ha nwee nnukwu ahụmịhe anụ ọhịa na ịnụ ọkụ n'obi, na ozi ahụ ga-agbadarịrị ndị ọrụ na-ekwurịta okwu na ndị njem nlegharị anya. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ugbu a nwere ndị na-ahụ maka okike na-akwụ ụgwọ ha, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị dị otú ahụ kwesịrị ịgba ha ume itinye aka n'ịmepụta akụkọ maka ndị njem nleta ka ha nwee anụrị anụ ọhịa dị n'ógbè ahụ.
N'ime afọ ndị gafeworonụ, anọ m na-ewepụta ọtụtụ akụkọ banyere ndị anụ ọhịa na-adọrọ adọrọ. N'ime ọtụtụ ndị ọzọ, edere m nke ọma na:
• Rambo elephant ọhịa nke na-agbagharị n'okirikiri ogige Uda Walawe.
• Onye nwụrụ anwụ na nnukwu Walawe Raja, eze Uda Walawe na-enweghị mgbagha ruo ọtụtụ iri afọ.
• Gemunu, ajọ elephant ọhịa nke Yala National Park, onye na-awakpo ụgbọ ala ndị ọbịa maka nri.
• Hamu na Ivan, ndị tozuru okè, n'okporo ámá-smart, nwoke agụ owuru (nke mesịrị nwụọ ugbu a) nakwa nke Yala National Park.
• Natta, agụ nwoke mara mma, na coy Cleo, agụ nwanyị tozuru okè, nke Wilpattu National Park.
• Timothy na Tabitha, 2 ọkara-tame nnukwu squirrels na Seenuggala Bungalow n'ime Uda Walawe Park.
Ewepụtala m ihe na-adịghị mma ha ma wuo àgwà gburugburu ha. Anaghịkwa m arịọ mgbaghara maka “imegbu” ha. Nke ahụ bụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị ndị mmadụ. M na nso nso a were akuko banyere agụ iyi, Villy na Jet Wing Vil Uyana Hotel, wee kọọ akụkọ dum gburugburu ya.
Africa nwere ike inwe ha "Nnukwu Ise" anumanu, ma anyi nwekwara umu anumanu nke "Big Four" nke anyi - whale blue, elephant, leopard na bear sloth. Ụfọdụ n'ime ndị ọrụ ibe m na-ekwu maka "Big Five" anyị, na-agbakwunye sperm whale na ndepụta a, mana ekwenyeghị m inwe ụdị abụọ n'ime otu ụdị na ndepụta ahụ.
Sri Lanka nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30% nke ụdị mkpuchi ndụ ndụ, ihe karịrị osisi 3,000, na ihe karịrị ụdị anụmanụ 1,000. Yabụ na anyị enweghị ụkọ ihe ọma njem nlegharị anya nke anụ ọhịa ihe nkwado. Ya mere, m na-eche ma Sri Lanka chọrọ n'ezie ọnụ ọgụgụ ndị njem nlegharị anya dị elu, ma ọ bụ ka anyị ga-agbaso atụmatụ dị iche iche nke ịdị mma karịa ọnụọgụ?
Sri Lanka nabatara ndị njem nlegharị anya nde 2.3 na 2018 na-enweta ego ruru ijeri US $ 4.4. 2018 bụ ọnọdụ ikpe kachasị mma, n'ihi na n'afọ 2019 anyị nwere mwakpo ndị na-eyi ọha egwu, ma emesịa anyị nwere ọrịa COVID. Njem nlegharị anya anụ ọhịa bụ akụkụ na-etowanye nke ọma na Wikipedia na-ekwu na njem nlegharị anya anụ ọhịa na-arụ ọrụ ugbu a nde mmadụ 22 n'ụwa niile ozugbo ma ọ bụ na-apụtaghị ìhè ma na-atụnye ihe karịrị ijeri $120 na GDP zuru ụwa ọnụ.
Ọbụna na Sri Lanka, anyị ahụwo mmụba dị ịrịba ama na akụkụ a. N'afọ 2018, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ndị njem nleta na mba ahụ gara ma ọ dịkarịa ala otu n'ime ogige ntụrụndụ anụ ọhịa, site na 38% na 2015. Dept. of Wildlife Conservation nwetara ihe dị egwu Rs 2.1 ijeri na 2018 site na ịzụ ahịa tiketi mba ọzọ.
Otú ọ dị, a ghaghị imesi ya ike na ụlọ ọrụ ndị njem na-eme ihe dị ka onye nlekọta nke ihe nkiri anụ ọhịa na Sri Lanka kama ime ka mmebi ha na-emebi emebi, nke ndị ọrụ nzuzo kwesịrị ịkpachara anya ma na-ahụ maka ya.